Coding ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောရာသီဥတုအခြေပြုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာမည်သို့စတင်မည်နည်း။ Martech Zone
Black သောကြာနေ့အရောင်းရဆုံး၊ ခရစ်စမတ်ဈေးဝယ်ထွက်ပြီးနောက်နှင့်ခရစ်စမတ်လွန်အရောင်းအဝယ်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်၏အရောင်းရဆုံးရာသီ၌ ထပ်မံ၍ တွေ့ရပြန်သည်။ ၎င်းသည်အအေး၊ မီးခိုးရောင်၊ မိုးနှင့်ဆီးနှင်းဖြစ်သည်။ လူများသည်ဈေးဝယ်စင်တာများသို့လှည့်လည်သွားလာခြင်းထက်အိမ်တွင်ထိုင်ကြသည်။
တစ်ဦးက 2010 လေ့လာမှု ဘောဂဗေဒပညာရှင် Kyle B. Murray ကနေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကစားသုံးမှုပိုမိုများပြားလာပြီးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အလားတူစွာမိုးအုံ့။ အအေးခံရသောအခါကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲနိုင်ခြေလျော့နည်းလာသည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံများစွာတွင်စားသောက်ဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များနှင့်ဈေးဝယ်စင်တာများသည်အစိုးရ၏ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ပိတ်ထားရသည်။ အားလုံးခြုံကြည့်လျှင်ခန့်မှန်းချက်သည်အလွန်အလားအလာကောင်းသည်ဟုမထင်ပါ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်မီးခိုးရောင်နှင့်ပျင်းစရာကောင်းသည့်ဆောင်းရာသီတွင်သင့်ရောင်းအားကိုမည်သို့တိုးမြှင့်နိုင်မည်နည်း။ ကောင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုမှာအထူးသဖြင့်ရာသီဥတုဆိုးရွားသည့်နေ့များ၌သင်၏ပရိသတ်ကိုကိုယ်ပိုင်၊ နောက်ခံအကြောင်းအရာများဖြင့် ၀ ယ်ရန်လှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်သည်။ အေးသောဆောင်းရာသီတွင်ရာသီဥတုအခြေပြုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုသင်လုပ်နိုင်သည်၊ ထိုကူပွန်ကုဒ်၊ အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အခမဲ့လက်ဆောင်ကဒ်သို့အခမဲ့လက်ဆောင်ကဒ်သို့လက်ဆောင်ကဒ်သို့ထည့်ပြီးသည့်နောက်ရရှိသောအပိုသစ္စာရှိမှုအချက်များ။ အမိန့်တစ်ခု။ ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်သည်အချို့သောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသောဖောက်သည်များကိုသာမည်သို့ပစ်မှတ်ထားမည်နည်း။
မိုးလေဝသစျေးကွက်ရှာဖွေရေး (ရာသီဥတုအခြေပြုသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ရာသီဥတုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး) သည်ကြော်ငြာများကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့်ဒေသတွင်းရာသီဥတုအပေါ် အခြေခံ၍ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီရာသီဥတုအခြေအနေကိုအသုံးပြုသည့်အစွမ်းထက်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။
ရာသီဥတုအခြေပြုလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ရန်ရှုပ်ထွေးပြီးအချိန်ကုန်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း SaaS, API-first solutions သည်အငယ်စားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဘတ်ဂျက်နည်းပါးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုလျင်မြန်စွာဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်သည်။
ဒီဆောင်းတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်, ငါတို့ ကွမ်းခြံကုန်း, လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အသုံးပြုမှုကိစ္စနှင့်နိမ့်ကုဒ်ရာသီဥတုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်း၏သင်ခန်းစာပြင်ဆင်ကြပြီ။ ယခုရာသီတွင်သင်အသုံးပြုရန်အတွက်နှစ်ရက်အကြာတွင် set-up ပြုလုပ်နိုင်သောအခြေအနေများကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ API စမ်းသပ်မှုငါးခုကို အသုံးပြု၍ ကုဒ်အနည်းငယ်သာ အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာရာသီဥတုအခြေပြုကူပွန်နှင့်လက်ဆောင်ကဒ်လှုပ်ရှားမှုများကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါ set-up ideation ခြေလှမ်းအပါအဝင်နာရီအနည်းငယ်ကြာခဲ့သည်။ အီးမေးလ်များကိုစုဆောင်းပြီးအသုံးပြုသူ၏ IP-based geolocation ကိုမျှဝေသော pop-up ပုံစံကိုသာကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ သို့သော်သင့် CMS ပလက်ဖောင်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောပုံစံမရှိလျှင်၎င်းခြေလှမ်းကိုကျော်သွားနိုင်သည်။
Zapier <> Aeris Weather - အလိုအလျောက် API
အပိုင်းအစိတ် - သုံးစွဲသူအချက်အလက်ပလက်ဖောင်း
ကွမ်းခြံကုန်း - အရောင်းမြှင့်တင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲ
ကြေးမုံ - အီးမေးလ်စျေးကွက်
Twilio - မိုဘိုင်းစျေးကွက်
ဤကိရိယာများအားလုံးသည် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ လမှစ၍ အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်စာရင်းပေးသွင်းမှုများမပြုလုပ်မီဤအစီအစဉ်ကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအခြေအနေနှစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ် - တစ်ခုကဒေသခံကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအတွက်။ ဤတွင်ယခင်ဖော်ပြခဲ့သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုပြီးနာရီအနည်းငယ်အတွင်းသင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်အရာများနှင့်ယင်းတို့အားလုံးကိုတည်ဆောက်ရန်မည်သည့်ခြေလှမ်းများကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
ဥပမာ ၁ - ဘာလင်ကော်ဖီ - ဒေသတွင်းရာသီဥတုလှုပ်ရှားမှု
၎င်းသည်ဘာလင်ရှိကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုအတွက်မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီအစတွင်သုံးစွဲသူများသည်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှတစ်ဆင့်မြှင့်တင်ရေးကုဒ် ၂ ခုကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည်နှင်းကျလျှင်မှသာသုံးနိုင်သည်။ (အပူချိန် -15 ° C အထက်တွင်ရှိလျှင်ပထမကုဒ်သည်အလုပ်လုပ်သည်၊ အကယ်၍ အပူချိန်သည် -15 °အောက်ဖြစ်လျှင်) ဂ) ။ ကူပွန်များကိုနေ့စဉ်အနေဖြင့်အလိုအလျောက်ပိတ်ထားသည်သို့မဟုတ်ဘာလင်အတွက်မိုးလေ ၀ သခန့်မှန်းချက်ကို အခြေခံ၍ Zapier အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပြီးနံနက် ၇ နာရီတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်စစ်ဆေးသည်။ ကူပွန်များကိုဖောက်သည်တစ် ဦး လျှင်တစ်ကြိမ်သာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ဘာလင်တွင်နှင်းကျနေလျှင်အများပိုင်ကူပွန် -20% ကိုဖွင့်ပါ။
ဘာလင်တွင်နှင်းကျနေပြီးအပူချိန် -15 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်သို့ကျဆင်းပါကအများပိုင်ကူပွန်ကို -50% ဖွင့်ပါ။
သင်၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းကို Voucherify သို့တင်သွင်းပါ။
စိတ်ကြိုက်ကုဒ်ပုံစံဖြင့် -20% နှင့် -50% အတွက်သီးခြားကုဒ်နှစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။
Twilio ပေါင်းစည်းမှုမှတစ်ဆင့်သုံးစွဲသူများအားကုဒ်များကို SMS မှတဆင့်မျှဝေပါ။ ဥပမာမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုဤသည်ကိုကြည့်နိုင်သည်
Zapier ကိုသွားပြီး AerisWeather နှင့်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။
Zapier စီးဆင်းမှုအတွင်း AerisWeather အားဘာလင်တွင်နေ့တိုင်းနံနက် ၇ နာရီတွင်နေ့တိုင်းစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုပါ။
အောက်ပါ Zapier လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုသတ်မှတ်ပါ။
ရာသီဥတုအခြေအနေကိုလိုက်နာပါကဘောက်ချာကို enable လုပ်ရန် Zapier သည် Voucherify သို့ POST တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပို့သည်။
ရာသီဥတုအခြေအနေကိုမလိုက်နာပါက Zapier သည်ဘောက်ချာများကိုပိတ်ထားရန် Voucherify သို့ POST တောင်းဆိုမှုကိုပို့သည်။
ဥပမာ ၂။ အွန်လိုင်းကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုလှုပ်ရှားမှု - Let It Snow
ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမြင်ကွင်းသည်သုံးစွဲသူများကိုနေရာအမျိုးမျိုးတွင်ပျံ့နှံ့စေသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဤစီးဆင်းမှုနှင့်အတူ, သင်သည်သူတို့၏ဒေသဆိုင်ရာရာသီဥတုအခြေအနေအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများနှင့်နိုင်ငံများမှအသုံးပြုသူများကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ မို်းပွင့်ဖြစ်လျှင်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏အမှာစာသည်ဒေါ်လာ ၅၀ ထက်ပိုပါကအခမဲ့ thermos အတွက်ကူပွန်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ နှင်းကျနေပြီးအပူချိန်သည် -15 ° C အောက်ရောက်လျှင်သုံးစွဲသူများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အထက်ရှိအမှာစာများအတွက်ဒေါ်လာ ၄၀ လက်ဆောင်ကဒ်ရရှိမည်။
ဖောက်သည်တစ် ဦး လျှင်တစ်ကြိမ်ရွေးပါ။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကာလအတွက်လက်ဆောင်ကဒ်သက်တမ်း (ငါတို့အမှု၌, 01/09/2020 မှ 31/12/2020) ။
ကြော်ငြာတစ်ခု (ဥပမာအားဖြင့်ဂူဂဲလ်သို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘုတ်ကြော်ငြာ) သည်ဖြည့်စွက်ရန်ပုံစံဖြင့်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာသို့ ဦး တည်သည်။ ပုံစံတွင် or ည့်သည်သည်ရာသီဥတုအခြေပြုလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ရန်တည်နေရာမျှဝေရန်နှင့်၎င်းတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
အသုံးပြုသူသည်သူတို့၏ (browser - ပေးထားသည့်) နေရာတွင်ပုံစံကိုဖြည့်သည့်အချိန်တွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်ဖော်ပြထားသည့်ရာသီဥတုအခြေအနေများရှိပါကကူပွန်သို့မဟုတ်လက်ဆောင်ကဒ်ကိုအသီးသီးရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကူပွန်များသို့မဟုတ်လက်ဆောင်ကဒ်များကို Braze အီးမေးလ်ဖြန့်ဝေမှုမှတစ်ဆင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောသုံးစွဲသူများထံသို့ပေးပို့လိမ့်မည်။ ကူပွန် / လက်ဆောင်ကဒ်များသည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစည်းမျဉ်းများ (Voucherify မှ) နှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောဖောက်သည်များသာသူတို့ကိုရွေးနုတ်နိုင်လိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူကလာပါတယ် ဆင်းသက်စာမျက်နှာ နှင့်၎င်းတို့၏အီးမေးလ်နှင့် geolocation သတင်းအချက်အလက်မှတဆင့်မျှဝေဖို့ပုံစံဖြည့်ပါ browser API.
ပုံစံသည်ဖောက်သည်အချက်အလက်များကိုဝက် (ဘ်) ချိတ်မှတဆင့် Zapier သို့ပို့သည်။
Zapier သည်အချက်အလက်များကို Segment သို့ပို့သည်။
အပိုင်းသည်အချက်အလက်များကို Braze နှင့် Voucherify သို့ပို့သည်။
Zapier သည် AerisWeather အားဒေသတွင်းရာသီဥတုအကြောင်းကို geolocation အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ မေးမြန်းသည်။ Zapier ကလိုက်မည့်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိသည်။
အကယ်၍ နှင်းကျနေပြီးအပူချိန်သည် -15 ° C ရှိလျှင်၊
Zapier သည် Voucherify ကိုယခင်ကဖောက်သည်များကို metadata ဖြင့် update လုပ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ isCold: true, isSnow: true ။
လက်ဆောင်ကဒ်များကိုလက်ဆောင်ကတ်များဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး၊ သုံးစွဲသူသည်သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါအစပျိုးသည်။ metadata လိုအပ်ချက်နှစ်ခုကိုပြည့်မီသော segment သည် isCold: true AND isSnow: true ။
အသုံးပြုသူတည်နေရာမှာနှင်းကျနေပြီးအပူချိန်က -15 ° C အထက်မှာဆိုရင်၊
Zapier သည်ဖောက်သည်အား metadata များဖြင့် update လုပ်ရန် Voucherify ကိုတောင်းဆိုသည်။ isCold: false, isSnow: true ။
အခမဲ့ thermos လျှော့စျေးကုဒ်များဖြန့်ဖြူးသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဝယ်သူသည်သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းသို့ဝင်သောအခါအစပျိုးသည်။ metadata လိုအပ်ချက်နှစ်ခုကိုပြည့်မီသော segment သည် isCold: false AND isSnow: true ။
ဖောက်သည် metadata ကို Voucherify တွင်ဖန်တီးပါ။
ဖောက်သည်အစိတ်အပိုင်းများကို Voucherify တွင်တည်ဆောက်ပါ။
Voucherify တွင်ထူးခြားသောကူပွန်များနှင့်လက်ဆောင်ကဒ်များ - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှစ်ခုကိုစီစဉ်ပါ။
Custom Attributes အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ Braze ဖြင့်အလိုအလျောက်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုပြင်ဆင်ပါ။
ဖောက်သည်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ပုံစံနှင့်တည်နေရာမျှဝေရန်ကိုနှိပ်ပါ။ (ဤနေရာတွင်သင်၏ e-commerce ပလက်ဖောင်း / CMS တွင်ပုံစံများမရှိလျှင်သင့်ကိုကူညီရန် developer လိုအပ်သည်)
Form မှလာသည့်အချက်အလက်များကိုဖမ်းယူရန်နှင့် Braze နှင့် Voucherify သို့လွှဲပြောင်းရန် Segment integration ကို set up ။
Zapier ကိုသွားပြီး AerisWeather, Segment နှင့် Voucherify plug-in များဖြင့် Zap တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောစီးပွားရေးပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီရန်စီးဆင်းမှုကိုလွတ်လပ်စွာစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ အထက်စီးဆင်းမှုသည်ဖောက်သည်များသည်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာပေါ်ရှိပုံစံကိုဖြည့်သည့်အခါရာသီဥတုအခြေအနေကိုအတည်ပြုခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ သင့်စတိုးဆိုင်ထဲမှမက်လုံးကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသည့်အချိန်တွင်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုစစ်ဆေးရန်ဤစီးဆင်းမှုကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမျိုးတွင်ဖောက်သည်အားလုံးသည်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်ရာသီဥတုအခြေအနေများတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်ဖက်သောစီးဆင်းမှုသည်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။
ပရိုမိုးရှင်းနှစ်ခုစလုံးသည်အခမဲ့စမ်းသပ်မှုများကိုပေးသည့် API-first solution ကို set-up လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင် set up လုပ်နိုင်သည်၊ ရက်အနည်းငယ်လောက်စတင်နိုင်ပြီးငွေပေးချေမှုမ ၀ င်မှီရလဒ်များကိုကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်တပ်ဆင်လိုပါက၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအခြေအနေနှစ်ခုလုံးအတွက် screenshots များနှင့်တစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ Voucherify.io 200 OK မဂ္ဂဇင်း.
ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှစ်ခုသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောပလက်ဖောင်းများ၏အသုံးပြုမှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ သင်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြား API - ပထမ ဦး ဆုံးပလက်ဖောင်းများကို အသုံးပြု၍ သင်တည်ဆောက်နိုင်သည့်အခြားအရာများမဟုတ်သောမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များရှိသည်။
Voucherify သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များအားဆက်စပ်သောကူပွန်၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လျှော့စျေး၊ ပေးကမ်းခြင်းနှင့်သစ္စာရှိမှုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်များကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာစတင်ရန် API ပထမ ဦး ဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်အသင်းများအတွက်ပရိုမိုးရှင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။